▷ Laptọọpụ kacha mma maka imewe eserese nke 2022
El laptọọpụ kacha mma maka eserese eserese ọ kwesịrị ịbụ ihe nrụpụta dị ike na ngwa ngwa, mkpebi dị elu, nnukwu RAM na ngosipụta agba ziri ezi. Ọ bụrụ na ị bụ ọkachamara na-ese ihe osise na ị na-emikpu n'ime ọchụchọ maka kọmputa iji zụlite ọrụ gị nke na-egbo mkpa ihe osise gị niile, mgbe ahụ ịgụ akụkọ a ga-abara gị uru. Enwere ọtụtụ nhọrọ dị na nke a nwere ike ịkarị oke. Ma echegbula! Anyị achịkọtala ndepụta n'okpuru iji nyere gị aka ịchọta ihe kacha mma na mpaghara asọmpi a.
1 Laptọọpụ kacha mma maka eserese eserese
2 Uru 5 kacha elu maka ego na laptọọpụ imewe eserese enyochala
2.1 asus zen akwụkwọ
2.2 Laptọọpụ dị elu 7
2.3 Laptọọpụ Apple MacBook PRO
2.5 Akwụkwọ Dell Inspiron 5570
3 Mac ọ bụ laptọọpụ kacha mma maka imepụta eserese?
4 Ụdị nwere laptọọpụ maka imewe eserese
5 Laptọọpụ egwuregwu ọ dị mma maka imepụta eserese?
6 Otu esi ahọrọ laptọọpụ kacha mma maka ndị na-ese foto
6.1 Mara ubi nke gi
6.3 Ebe nchekwa RAM: njirimara kachasị mkpa
6.4 Kaadi eserese
6.5 Nnukwu nha ihuenyo ahụ
6.6 Draịvụ ike
6.7 Ihu mmetụ aka
6.8 Mgbe ị ga-atụle ibuga laptọọpụ
6.9 Ogo onyoonyo
6.10 Usoro njikwa
7 Kedu ihe kpatara ịhọrọ laptọọpụ imewe eserese n'elu desktọpụ?
8 Enwere kọmpụta eserese eserese dị ọnụ ala?
9 Ngwa ndị ị nwere ike iji na kọmpụta ndị a maka imewe
9.3 Onye ihe ngosi
9.6 Mgbe emetụta
Laptọọpụ kacha mma maka eserese eserese
Si buscas Laptọọpụ kacha mma maka imewe esereseN'okpuru ebe a ị nwere ndepụta nhọrọ kacha mma ị nwere ike ịchọta.
Maka anyị, ndị a bụ ụdị laptọọpụ 7 kacha mma maka imepụta eserese:
MSI nke oge a
Akwụkwọ Huawei Mate
Ọ bụrụ na anyị ga-aza ajụjụ nke Kedu ihe bụ laptọọpụ kacha mma maka imewe eserese, azịza anyị doro anya: MacBook Pro.
Ọ bụghị naanị na anyị na-anụ ụtọ ya ruo ọtụtụ afọ, ọ bụ na onye ọ bụla nwere ya ma ị jụọ ga-eme ka ọ ghara ikwu okwu ọjọọ banyere ya. Ọ dị oke ọnụ? Ọ dabere. Ụdị 13 nke anụ ọhịa ahụ enweela ike dị ukwuu na ọnụahịa ya dị, na mgbakwunye, ọ bụrụ na ọ ga-abụ ngwá ọrụ gị, ọ ga-abụ na ị ga-etinye ego n'ihi na ị ga-echekwa ya n'oge na nsogbu nke ụdị ndị ọzọ na-emekarị. nye.
Uru 5 kacha elu maka ego na laptọọpụ imewe eserese enyochala
Anyị edepụtala kọmpụta kacha mma na ịntanetị site n'aka ndị ọrụ na-arara onwe ha nye n'ichepụta dijitalụ. Kwuo na mmefu ego dị gburugburu € 1.000 ruo € 2.000 ihe dịka, ebe ọ bụ maka ngwaọrụ maka ndị ọkachamara. Ọ bụrụ na ịnweghị ike imefu nnukwu ego ahụ, enwerekwa ihe ọma laptọọpụ na-erughị 1000 euro nke ị nwere ike iji maka nhazi eserese.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ihe eleghị anya dị ọnụ ala karịa n'echiche a, anyị ga-akwado ka ị na-ele anya na laptọọpụ na-erughị 1.000 euro.
ZenBook, nke Asus ji nganga kpọọ "anụ ọhịa ahụ" (anyị kwenyere na ya), na-enye arụmọrụ siri ike n'ihe gbasara ike, nrụpụta na ọsọ. Ya nnukwu, elu-edu ngosi nke 14 sentimita na ihe nhazi isi i7 nke a bụ naanị otu n'ime Laptọọpụ kacha mma maka eserese eserese na ahịa maka uru maka ego.
Asus ZenBook kachasị mma n'akụkụ ọ bụla nke imewe eserese, na-eme ka ọrụ gị nwee ahụmịhe na-arụpụta ihe. Otu n'ime njirimara na-eme ka kọmpụta a zuo oke maka imepụta eserese bụ na o nwere a Full HD IPS ihuenyo, na-enye ọmarịcha agba na nkọwa zuru oke, onyonyo dị nkọ site n'akụkụ niile.
Laptọọpụ dị elu 7
Ọ bụ laptọọpụ dị fechaa. Ihe dị n'elu 7 bụ ngwakọta nke Core i7 processor n'otu aka yana eserese dị iche na nke ọzọ. Intel HD 620. Enwekwara nhazi ndị ọzọ dị ala (ma dị ọnụ ala) na i5 processor dị ka nke anyị na-akwado, ebe ọ na-arụ ọrụ nke ọma na ma e wezụga maka ọrụ dị arọ, ọ ga-arụ ọrụ nke ọma maka ịmepụta eserese.
Laptọọpụ ahụ nwere a Ihuenyo mgbochi glare 12,3 inch, nke ga-aba uru maka ndị na-emepụta ihe osise, ebe nke a na-enye gị ohere ịnụ ụtọ mkpebi ahụ 2736 × 1824 pikselụ Ka na-egbuke egbuke anyanwụ
Microsoft Surface 7 bụ ọla ọcha na agba, ọ nwere elu aluminom na-atọ ụtọ nke ukwuu na mmetụ ahụ. na-enye gị nchekwa 128GB SSD nke nwere ike ịgbasa ngwa ngwa, gbakwunyere nnukwu RAM, nke na-arụ ọrụ dị ukwuu, onye nrụpụta ike na nnukwu ihuenyo.
Ndị na-emepụta eserese ga-eritekwa uru na nke ahụ ndụ batrị dị elu na Surface 7 nwere. Akwụkwọ ndetu na-eji teknụzụ dị elu iji chekwaa ike, si otú a na-enye gị ohere ịrụ ọrụ na mgbasa ozi ruo ogologo oge.
Na kaadị eserese gị Intel HD 620, Surface 7 na-amanye maka ịchọ webụ, gụgharia vidiyo HD, na n'ezie idezi foto na vidiyo.
Laptọọpụ Apple MacBook PRO
Na ntụnyere a, ngwaahịa Apple enweghị ike ịla efu. Apple MacBook PRO nwere ike iguzogide ule ọ bụla onye nrụpụta eserese na-etinye ya. Nke Ngosipụta retina dị nnọọ ịtụnanya: The ikiri akụkụ bụ nnọọ obosara na ihuenyo ihie bụ magburu onwe ya. Ọ dị ka a ga-asị na ha wulitere kọmpụta nwere eserese eserese n'uche.
Ebugola imewe, imepụta ihe na nrụpụta MacBook PRO n'ọkwa ọhụrụ. Iji mee ka ọ bụrụ kọmpụta eserese ka ọ dị gịrịgịrị mana enwere ogologo ndụ batrị, Apple ewepụla diski ngwa anya.
MacBook PRO bụ ike, arụ ọrụ, ngwa ngwa, ọhụrụ na ọ na-arụ ọrụ dị ukwuu nke ijikwa ọtụtụ ọrụ dị arọ. Anyị ji n'aka na ị gaghị emechu ihu.
Agbanyeghị, kọmpụta a nwere ụfọdụ ọghọm anyị ga-agwa gị gbasara ya. Ozugbo a nwalere na Mac, ọ siri ike ịhapụ sistemụ arụmọrụ gị. Jikere maka ihe niile ga-aga nke ọma, ike maka ọrụ ọ bụla yana nnwere onwe dị egwu.
Na mgbakwunye, ụdị MacBook Pro ọhụrụ a na-abịa na TouchBar, mmanya mmetụ nke ga-enye gị ohere ịnweta ọrụ a na-ejikarị eme ihe n'ọtụtụ ebe dị ka Photoshop ma ọ bụ InDesign. Obi abụọ adịghị ya, nke a bụ nnukwu laptọọpụ maka imewe eserese na ọrụ ọ bụla ọzọ nke chọrọ ịrụ ọrụ dị elu.
Ọ bụrụ na e nwere onye nnọchi anya kachasị nke post-pc nke ọtụtụ ndị na-ebu amụma ruo ọtụtụ afọ, ya bụ, n'enweghị mgbagha, Lenovo Yoga, kọmpụta ngwakọ nke ị nwere ike iji dị ka laptọọpụ ma ọ bụ gbanwee ghọọ mbadamba nkume mgbe ọ dabara gị. kacha mma na naanị mmegharị aka. Ya mere, ọ bụ ngwá ọrụ na-agbanwe agbanwe ma na-agbanwe agbanwe, ya mere aha ya, Yoga.
Nke a Lenovo Yoga 920 na-enye anyị ihe pụrụ iche 13,9-inch Ultra HD Multi-Touch LED ihuenyo nwere mkpebi 3840 × 2160, ezigbo ihe ịtụnanya nke ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ agba mara mma ma dị egwu, nnukwu ọdịiche na ịdị nkọ na, n'ikpeazụ, ihe ịtụnanya. Ogo onyonyo ma ka ị na-egwu net na ikiri fim na usoro ọkacha mmasị gị, dee akwụkwọ klas gị, dezie foto gị, bulie vidiyo nke gị na ihe niile ị nwere ike iche n'echiche. Ma ọ bụ Lenovo Yoga Ọ bụ nnukwu ike mgbanwe ma ọ bụ laptọọpụ maka imewe eserese.
Ọ na-abịa na Windows 10 dị ka ọkọlọtọ, nke ga-enye gị ohere ịnụ ụtọ uru niile nke sistemụ arụmọrụ desktọpụ, ebe n'ime ya nwere 5 GHZ Intel Core i2,5 processor nwere kaadị eserese Intel UHD Graphics 620, 8 GB nke DDR4 RAM na 512 GB. nke nchekwa na diski nke ụdị SSD. Na ihe a niile, ị ga-eche na kọmputa gị "na-efe efe" na ị nwere ike na-arụ ọrụ na ọtụtụ ngwa n'out oge na-enweghị emetụta arụmọrụ.
Na mgbakwunye, ọ nwere ọdụ ụgbọ mmiri USB 3.0 abụọ zuru oke nke ị nwere ike jikọọ ngwaọrụ ndị ọzọ dị na mpụga dị ka igwefoto, òké, draịvụ ike mpụga, pendrive; ọ na-enyekwa njikọ HDMI, zuru oke maka ijikọ na ihe nleba anya ma ọ bụ TV ụlọ, yana WiFi na njikọ Bluetooth.
Na akụkụ nke 2 1,3 x 1,4 x 31 cm, ịdị arọ nke 1,3 kilos na batrị zuru ezu maka ụbọchị dum, na Lenovo Yoga 920 ị nwere ihe niile ịchọrọ ịrụ ọrụ, ọmụmụ na inwe anụrị, na uru nke ịnweta ngwaọrụ abụọ. otu.
Akwụkwọ Dell Inspiron 5570
Ọ bụ laptọọpụ nke, n'ihi nha ihuenyo ya, nwere ike iwere ya dị ka nnukwu ngwaọrụ. CV Akwụkwọ Dell Inspiron 15 Ọ bụ laptọọpụ ka i kwesịrị iburu n'uche. Jiri ihe nhazi 3,1GHz (ruo 3,8) Intel Core i5, cache 3MB na cores 4. Nke a na-eme ka ọ dị ike n'ịrụ ọrụ maka ọrụ dị iche iche, ọ bụghị naanị nhazi eserese. Eserese gị AMD Radeon R7 (5GB GDDR4 raara onwe ya nye) Kaadị ahụ adịghị ike karịa akwụkwọ ndetu ndị ọzọ na ndepụta ahụ, mana ihuenyo 15.6 ″ nwere ike mee ka ọ bụrụ nhọrọ ziri ezi ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ eserese buru ibu mgbe ị na-arụ ọrụ.
Dị ka ọ dị na ngwaahịa ndị ọzọ dị na ahịrị Dell Inspiron, ọ nwere njiri mara mma nke ọma na ntinye aka n'inye ahụmịhe mgbasa ozi bara ụba nke a na-ebuga n'ọtụtụ ebe, n'akụkụ nke ekele ya. olu agbakwunyere. Na-efu otu ihuenyo mmetụ inwe ọtụtụ ọrụ ị nwere ike ịtụ anya n'aka ọrụ mbadamba, yana ọ dabara nke ọma na Metro UI nke Windows 10.
Mac ọ bụ laptọọpụ kacha mma maka imepụta eserese?
Ọfọn nke a nwere ike ịbụ okwu arụmụka na Ngwanrọ dịnụ kwesịrị iburu n'uche. Maka Windows, anyị ga-achọta ngwa ngwa niile, ebe macOS nwere ihe dị obere. M na-akọwa nke a n'ihi na ọ ga-abụ na, ọ bụrụ na anyị na-eji Mac, anyị nwere ike ịhụ otu maka graphic imewe na-adịghị, mgbe kasị ewu ewu ga-mgbe niile maka Windows.
N'ịkọwapụta ihe ga-ekwe omume gara aga, a ghaghị ime ka o doo anya na ọ bụ naanị ihe nwere ike ime, ma ọ dịpụrụ adịpụ. Nke Ngwa kacha mma maka imepụta eserese, dị ka Adobe niile, dị maka Mac, na macOS bụ sistemụ arụmọrụ na-enye arụmọrụ ka mma karịa Windows, ụdị sistemụ Microsoft ọ bụla anyị họọrọ.
Onye ọ bụla dere ahịrị ndị a na-ejikwa Linux ọtụtụ ihe, nke ga-enyere aka ịkọwa na Linux, n'agbanyeghị na ọ nwere ike ịnye arụmọrụ ka mma karịa macOS, abụghị nhọrọ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na anyị dabere na ngwanrọ nwe ya dị ka Adobe. Linux nwere sọftụwia nke mepere emepe na nke mepere emepe, mana ọ bụrụ na ụlọ ọrụ anyị na-arụ ọrụ anaghị eji ngwanrọ ahụ, kọmpụta nwere Linux anaghị arụ ọrụ maka anyị. A pụkwara ikwu otu ihe ahụ maka sistemu ndị ọzọ, dị ka BSD.
Ya mere, nhọrọ kacha mma bụ nke anyị nwere ike iji ngwa ngwa eserese eserese kacha ewu ewu wee mee ya. n'ụzọ kacha arụ ọrụ na nke kacha mma, na n'enweghị obi abụọ, ndị kasị guzosie ike otu bụ Apple Mac otú na apple laptọọpụ ha bụ ezigbo ndị na-aga ime ihe ọ bụla metụtara ụwa nke imewe na foto.
Gụọ echiche anyị banyere laptọọpụ Apple
Ụdị nwere laptọọpụ maka imewe eserese
E nwere ụfọdụ karịsịa ụdị ama ama maka atụmatụ nke onye nrụpụta eserese ọ bụla chọrọ site na laptọọpụ. Ụlọ ọrụ ndị a bụ:
Onye nrụpụta China na-enye otu n'ime uru kacha mma maka ego, yabụ ị nwere ike nweta ụfọdụ atụmatụ adịchaghị n'ọnụ ahịa ezi uche dị na ya. N'ime akwụkwọ akụkọ niile nke ụdị nke nrụpụta a, ị nwere ike ịchọ n'etiti Yoga 2 na 1, maka ndị chọrọ iji ihuenyo mmetụ na mkpịsị akwụkwọ rụọ ọrụ.
Maka ndị ọrụ na-achọ otu nwere nguzozi dị ka o kwere mee, ThinkPads ma ọ bụ IdeaPads nwere ike ịbụ nhọrọ kachasị mma. Ma ọ bụrụ na ị na-achọ kacha arụmọrụ, mgbe ahụ, ị ​​nwere ike họrọ Legion.
Asus nwere ọtụtụ ụdị dị egwu maka ndị nrụpụta eserese niile maka ngwaike ya na ịdịmma ya. Agbanyeghị, ụfọdụ ngbanwe ya na 2-in-1 nwere ike inye nkasi obi dị ukwuu maka ndị ọkachamara na ndị amateur na guild a. Oke Zenbook Pro Duo, nwere ihuenyo okpukpu abụọ, pụtara nke ọma.
Onye nrụpụta America nwekwara nwere nnukwu ọnụ ọgụgụ nke ụdị iji kwado mkpa na akpa niile. Mana maka imewe eserese, ụdị mgbanwe ma ọ bụ 2-in-1 nwere ike ịpụ iche, dị ka Envy x2, Specter 360, Elitebook, wdg.
N'ezie, na imewe ika a enweghị ike na-efu. Ndị otu ha nwere otu nyiwe ọrụ kachasị mma, na-enye nkwụsi ike, ike na nchekwa iji bulie arụpụta ọrụ.
Na mgbakwunye, enwere ọtụtụ ngwanrọ imewe ọkachamara maka macOS, yana digitizer ma ọ bụ mbadamba eserese enwere ike iji ya, ọbụlagodi iji iPad dịka otu n'ime ha.
N'aka nke ọzọ, ma ikuku na Macbook na Macbook Pro ha nwere ihe ngosi magburu onwe ya na eserese maka ụdị ọrụ a. Ihe dị njọ bụ na ha enweghị ihuenyo mmetụ aka ...
Laptọọpụ egwuregwu ọ dị mma maka imepụta eserese?
Un laptọọpụ egwuregwu, Dị ka ị ga-enyocha ya site na ụfọdụ ụdị nke m kwuru na ngalaba gara aga, ọ nwere ike ịbụ ezigbo otu maka graphic imewe na video edezi site n'inwe àgwà ndị ahụ a na-achọkwa maka ọrụ a kwalitere, dị ka ihuenyo dị mma, kaadị eserese dị ike, nnukwu ikike nchekwa, na nhazi nke na-arụ ọrụ nke ọma. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, atụmatụ ndị na-abịa dị ka uwe aka na ngwanro eji eme ihe.
N'aka nke ọzọ, ọ bụghị ihe niile bụ uru nke ụdị ngwá ọrụ a maka iji mee ihe. Ebe ị nwere ike inyocha ihe uru na ọghọm:
Ventajas: Ngwaike eserese dị ike, ihuenyo buru ibu na ịdị mma maka ahụmịhe ọhụụ ka mma.
Ọghọm: ha dị oke ọnụ, oriri ha dị elu, ya mere a ga-emetụta agagharị na nnwere onwe, na ha anaghị agụnye ihuenyo mmetụ maka ịbịaru.
Otu esi ahọrọ laptọọpụ kacha mma maka ndị na-ese foto
Tupu ịzụrụ laptọọpụ maka imewe eserese, ma ọ bụ ọrụ ọ bụla ọzọ, ọ dị mma. mara oke kọmputa kacha mma maka ịrụ ọrụ ahụ ihe ọsịse. Mgbe a laptọọpụ maka graphic imewe nke 15 sentimita a 17 sentimita nwere ike ịdị mma na akwụkwọ, ọ nwere ike ọ gaghị abụ nhọrọ kacha mma ma ọ bụrụ na ị ga-eji ya na-aga n'ihi oke ya.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ụdị ndị ọzọ na-ajụ ọkara na njikọ ndị a, ị ga-ahụ ntụnyere nke kacha mma Laptop 15 inch na n'ihe banyere nha bụ ihe anyị na-akwado ugbu a.
N'otu aka ahụ, obere laptọọpụ imewe ihe osise nwere ike ọ gaghị enwe ohere ahụigodo ịchọrọ ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ime ọtụtụ mpịpị. Ihe kacha mma ị nwere ike ime bụ ịchọgharị na laptọọpụ anụ ahụ tupu ịzụrụ otu, n'ụlọ ahịa ma ọ bụ iji laptọọpụ enyi nweburu. Na nke a, ị nwere ike ikpebi oke nke ịchọrọ.
Nke a nwere ike ịdị ka nzọụkwụ dị mfe ịme, mana laptọọpụ imewe eserese nwere ike ịbụ ego ị ga-eji maka afọ atọ ma ọ bụ anọ dị mma tupu ị tụlee ị nweta nke ka mma, ngwa ngwa. N'ezie, ụfọdụ kọmpụta ndị buru ibu zuru oke iji were ogologo oge. Ọ bụ ihe ịchọrọ ka ị nwee ike iyi, rụọ ọrụ, na ibu nke ọma. Ọ bụ ya mere na ọkpụrụkpụ nke graphic imewe pc na arọ bụkwa ihe ndị ị kwesịrị iburu n'uche.
Ebumnuche bụ isi nke ndị na-emepụta laptọọpụ bụ imepụta kọmpụta ndị na-adịchaghị mkpa, ọbụnadị obere ọkụ na-ere ahịa, yabụ ọ bụrụ na i jiribeghị laptọọpụ n'ime afọ ole na ole, ọ ga-eju gị anya ka ìhè ha siri bụrụ ọgbọ ọhụrụ nke akwụkwọ ndetu. Ụfọdụ n'ime kọmputa kacha mma maka imepụta eserese nwere ike ịdị ihe na-erughị kilogram 2, ma ọ bụ ọbụna daa n'okpuru gram 1500. Nke a na-eme ka ịzụrụ laptọọpụ kwesịrị ekwesị dị ka ihe nkasi obi karịa ịrụ ọrụ, na akụkụ ọ nwere ike ịbụ. Dabere na izute kacha nta teknuzu e ji mara na anyị ga-eguzobe, n'ezie.
Eserese eserese bụ ọrụ chọrọ ngwaike chọrọ, a na-enyekwa ihe a chọrọ, na mgbakwunye na nha faịlụ, site na ihe achọrọ nke ngwanrọ eji. Ruo ogologo oge gara aga, enwere ike itinye mmemme maka imepụta eserese naanị na kọmpụta dị ike, nke na-abụkarị desktọpụ. N'oge na-adịbeghị anya, nnweta ndị nrụpụta ike na kaadị eserese maka ngwaọrụ mkpanaka emeela ka mpụta nke laptọọpụ dị ike na ahịa.
A na-akpọ ọtụtụ n'ime ha kọmputa laptọọpụ egwuregwu, mana ndị na-ese eserese anaghị eji ya eme ihe n'ihi oke ibu na oke ọdịdị ha. Nke kacha mma laptọọpụ maka graphic imewe Ọ bụghị naanị na ha ga-adị ike, ha ga-abụkwa ihe dị iche iche na ịdị arọ. Laptọọpụ ndị ahụ ga-enwerịrị ihe mejupụtara ya ka ike nke dị ugbu a, mana ọ ga-abụrịrị mfe ibu na mfe iburu. Laptọọpụ ndị a bụ ihe nyocha a gbasara, n'agbanyeghị na enwere ọtụtụ ndị ọzọ.
Mara ubi nke gi
Nhazi eserese abụghị mgbe niile ihe ị na-emepe emepe n'ụlọ ọrụ ma ọ bụ ebe ọ bụla edobere. Ị nwere ike were ọrụ gị mgbe ị nọ n'etiti ezumike, na-ahụ ezinụlọ, ma ọ bụ na-ewere ya wee weta ya site na ebe ọrụ gị ka ị nwee ike ịrụcha ọrụ n'ụlọ ma ọ bụ ọbụna n'ọfịs onye ahịa.
N'iburu nke a n'uche, ị ga-ahụ onwe gị n'ebe ị chọrọ ike nke kọmputa desktọpụ, na obere mbadamba nkume, nke a bụ ebe laptọọpụ na-egwu egwu. Inwe nkọwa nke gị maka laptọọpụ kacha mma dị fechaa nwere ike inyere gị aka nweta kọmputa ziri ezi. Ndị na-emepụta laptọọpụ enwewo ike ịkwalite ma melite ngwaahịa ndị a n'ọtụtụ ụzọ.
Nhazi mara mma, agba agba ma ọ bụ mbelata ibu emewo ka ọ na-arị elu ịhụ ka ndị mmadụ na-eji laptọọpụ arụ ọrụ na tebụl ụlọ ọrụ ha. Ejikọtara ya na usoro ndị ọzọ na-ajụ oyi ka mma yana akara ukwu na-abawanye ntakịrị, draịva siri ike na ngwa ngwa, akwụkwọ ndetu ultrathin aghọwo ngwaọrụ siri ike ma kwụsie ike maka ọtụtụ ọrụ, gụnyere imewe eserese. Tụkwasị na nke ahụ, a na-emepụtawanye ha n'ụzọ dị otú ahụ na-enye arụmọrụ ka ukwuu, nke ghọrọ ngwọta zuru oke maka ọrụ ọ bụla a ga-arụ na ha.
Teknụzụ Hyper-stringing dị ma na I5 isi dị ka na I7 isi. Teknụzụ Hyper-stringing na-ewusi arụmọrụ nke kọmputa eserese gị ike n'oge ọrụ dị arọ, nke pụtara na ọ bụrụ na ị na-ejikwa ọtụtụ ojiji n'otu oge, dịka ọmụmaatụ. ex. bulite faịlụ na ígwé ojii wee rụọ ọrụ na Photoshop (ma ọ bụ Sony Vega), ekele maka teknụzụ Hyper-stringing ị ga-enweta arụmọrụ dị mma na ngwa ngwa nke PC maka imepụta eserese eserese.
Ọ bụ ezie na Core i5 nwere ike ime ọtụtụ ojiji n'otu oge na-enweghị nnyonye anya, lag, ma ọ bụ kefriza, Core i7 na-enye ihe niile ọbụna ngwa ngwa na ahụmahụ dị ike karịa. Ewubere Core i7 maka imewe eserese, ma nwee ike inye ihe niile laptọọpụ gị chọrọ ka ị nwee ike ịrụ ọrụ nke ọma n'oge ọ bụla yana ọrụ ọ bụla.
Ya mere, Core i7 bụ otu n'ime CPU kacha mma dị n'ihi na ọ na-arụ ọrụ pụrụ iche n'ihe gbasara ọsọ, eserese, nha agba, na arụmọrụ zuru ezu. Yabụ ọ bụrụ na ị bụ onye nrụpụta ihe osise, Core i7 agaghị emechu gị ihu wee bụrụ onye nrụpụta kacha akwadoro maka ịbụ otu n'ime ka ike Ọ bụ ezie na Core i9 wepụrụ ya ma bụrụzi onye nrụpụta ike kachasị ike nke Intel, zuru oke maka ndị na-achọ laptọọpụ maka imepụta eserese ma na-achọsi ike ịrụ ọrụ.
Laptọọpụ eserese eserese ọ na-abịa na ihe nrụpụta AMD? Echegbula. AMD bụ a processor emeputa nke kacha ewu ewu nso bụ usoro ryzen. Ugbu a, ụlọ ọrụ California na-enye ọtụtụ ụdị AMD Ryzen 3, AMD Ryzen 5, na AMD Ryzen 7, nke dabara na Intel's i3, i5, na i7. Onye kacha nwee uche n'ime atọ ahụ bụ Ryzen 3 mana, n'adịghị ka Intel's i3s, atụmatụ AMD ga-enye anyị ohere ịrụ ọtụtụ ọrụ na-enweghị mmetụta na anyị na-ebugharị akụrụngwa dị arọ.
El AMD Ryzen 5 dị na 8 variants na n'etiti 4 na 6 cores na kasị elu nke nso na-enye a 4.2GHz kacha ọsọ elekere. Ná mmalite, ọ na-enye ihe karịrị arụmọrụ zuru ezu iji rụọ ọrụ nhazi, ya mere, nke a kwesịrị ịbụ nhọrọ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịrụ ọrụ na nkasi obi na ihe nkwụsịtụ na-enweghị ime nnukwu ego.
Ọzọkwa, AMD na-enyekwa ndị Ryzen 7, processor na na-eme ka arụmọrụ nke Intel i7 dịkwuo mma. Ha dị ntakịrị ngwa ngwa karịa Ryzen 5, yana ọsọ elekere kachasị elu ruo 4.3GHz, mana nke a na-enweta ya na cores abụọ ọzọ, nke pụtara na ọ na-ejikwa ọrụ ahụ nke ọma na anyị nwere ike nweta ọrụ anyị ngwa ngwa. .
Ebe nchekwa RAM: njirimara kachasị mkpa
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-anụ ọkụ n'obi na-achọ ịzụrụ kọmpụta nkeonwe, cheta na akụkụ kacha mkpa dị na kọmpụta mkpanaka nkeonwe bụ RAM.
Malite na ala na 8GB wee si ebe ahụ gaa n'ihu. Ka RAM buru ibu, ka ọrụ ndị ọzọ ị ga-enwe ike ịrụ n'otu oge na-enweghị kọmputa na-enwe nwayọọ nwayọọ. Ndị na-ahụ anya, dị ka nke ndị na-egwu egwuregwu, chọrọ ọtụtụ RAM.
Yabụ, gbalịa ileba anya na DDR4 2133 nke bụ otu ọnụahịa ka DDR3 1600 ma nwee ọsọ nhazi dị elu. Ụfọdụ laptọọpụ egwuregwu kacha mma na-esokwa ha na ndabara.
Ọ bụrụ na ị na-eji laptọọpụ gị maka nkọwa anya, ị nwere ike ịnwe mkpa iji kaadị vidiyo dị ọnụ ala karịa onye na-egwu egwuregwu. Ọ bụrụ n’ịrara onwe gị nye nkọwa a na-ahụ anya, ị kwesịrị inye kaadị vidiyo dị mkpa karịa RAM. Nke kacha mma na mpaghara a bụ Nvidia GeForce GTX 3060. O nwere 6 GB nke VRAM na 980 MHz. Ọ bụrụ na ị na-achọ naanị laptọọpụ mmefu ego kacha mma, ị ga-elele AMD Radeon R9 295X2.
Ike nke kaadị eserese nwere mmetụta dị ukwuu n'oge nsụgharị na ngwa nke mmetụta, yabụ ọ bụrụ na ị ga-arụ ọrụ na nnukwu faịlụ, anyị na-akwadosi ike na laptọọpụ imewe ị zụtara nwere eserese raara onwe ya nye na ebe nchekwa RAM nke anaghị eso na sistemụ.
Nnukwu nha ihuenyo ahụ
Dịka onye ode akwụkwọ anya, ịchọrọ ohere iji rụọ ọrụ. Naanị ma ọ bụrụ na ị họrọ mbadamba nkume nwere ihuenyo 13-inch, ana m akwado ka ị chee echiche ugboro abụọ n'ihu. Tụlee kọmputa niile Laptop 15 inch ma ọ bụ ọbụna nke kacha mma Laptop 17 inch. Ọ bụ ezie na nke a, dị ka anyị kwurula na mbụ, dabere na mmasị na mkpa. Ị ga-amarịrị nha ị chọrọ ma nke a jikọtara ya na isi ihe na-esonụ
Ọ bụrụ na ị nyekwaara onwe gị aka na ihe atụ, ikekwe ị bara uru na ihuenyo ahụ dị nro ka ị zere ịzụrụ mbadamba ihe n'agbanyeghị na anyị anaghị akwado ka ị kpachapụ ịzụrụ ihe n'akụkụ a ebe ọ bụ na, ma e wezụga n'oge ụfọdụ, ihuenyo mmetụ aka ha adịchaghị ike.
Na mgbakwunye, ị ga-ahọrọ mkpebi kachasị enwere ike, site na FullHD gawa. Nke a ga-agbakwunye njupụta pikselụ dị elu ka onyinyo ahụ ghara ịgbagọ ma ọ bụrụ na i lere ya anya nke ọma. Mara na ọ bụ ihuenyo nwere ezigbo nkọ, izi ezi agba, ọnụego ume ọhụrụ na oge nzaghachi.
Draịvụ ike nwere ike ịdị mkpa na kọmpụta ọ bụla, gụnyere ndị emebere iji chepụta, gbaghara nrụgharị ahụ. Ọ bụrụ na anyị ga-eji laptọọpụ na-emepụta ihe, anyị ga-eburu n'uche na anyị ga-achọ nnukwu ohere. Ọ bụrụ na ihe dị anyị mkpa bụ ego nke nchekwa na anyị achọghị imefu oke, anyị nwere ike tụlee a laptọọpụ na HDD diski, ma ọ bụ ihe bụ otu, ndị nke ndụ. Ọ bụrụ na anyị ahọrọ diski HDD, ikike ahụ ga-adị ukwuu ma kọmpụta ga-echekwa ọnụ ahịa ya, mana ọsọ agaghị abụ nke kachasị elu.
N'aka nke ọzọ, e nwere SSD draịva, nke bụ "flash" ebe nchekwa diski nwere oke ịgụ na ide ihe. Mgbe anyị na-arụ ọrụ imewe anyị agaghị achọpụta mgbanwe ọ bụla, mana anyị ga-ahụ nnukwu ọsọ mgbe anyị chọrọ ịchekwa / mepee ma ọ bụ detuo ọrụ dị arọ. N'ezie, na laptọọpụ nwere SSD diski Ha dị ọnụ karịa ma ikike ha dị ntakịrị, ọ gwụla ma anyị mefuru ego. Opekempe nke diski anyị ga-adabere na iji onye ọ bụla, mana ị nwere ike zụta laptọọpụ nwere diski 128GB SSD na-enweghị ọnụ ahịa ha na-abawanye.
Nhọrọ ọzọ bụ iji zụta laptọọpụ ngwakọ diski, nke pụtara na ọ nwere obere akụkụ na SSD yana akụkụ buru ibu na HDD. N'akụkụ SSD, sistemụ arụmọrụ na data anyị na-eji nke ukwuu ga-echekwa ozugbo, ebe n'akụkụ HDD, a ga-echekwa ihe ọ bụla ọzọ.
Ndụmọdụ anyị bụ na ọ bụrụ na ị ga-azụta laptọọpụ maka imepụta eserese, nwee opekempe 256 GB SSD draịvụ ike (ọ bụ ezie na opekempe akwadoro ga-abụ 512GB) wee jiri diski ike mpụga 1TB ma ọ bụ 2TB chekwaa foto, vidiyo, wdg. .
Chaja QYD 65W...
Inwe ihuenyo mmetụ na laptọọpụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ uru niile, karịsịa ma ọ bụrụ na anyị bụ ndị na-emepụta ihe. Enwere ike inwe nsogbu ole na ole, nke doro anya bụ ọnụahịa. A touchscreen laptọọpụ ị ga-agbakwunye ngwaike ọzọ, nke na-ebutekarị a ọnụ ahịa dị elu.
N'aka nke ọzọ, ohere anyị na-enweta ahụhụ mgbe anyị na-eji kọmpụta nwere ihuenyo mmetụ enweghị ike iwepụ n'ihi na, n'agbanyeghị na ọ bụghị otú ahụ, e mepụtala sistemụ arụmọrụ desktọpụ ka a ga-eji na kọmputa na-enweghị a. ihuenyo mmetụ ọ bụ ezie na oge ọ bụla ndakọrịta dị elu.
N'ịgafe ihe ndị a dị n'elu, kọmpụta ihuenyo mmetụ nwere ike ịbụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma maka ndị na-emepụta ihe. Iji malite, anyị nwere ike iji ha na Stylus, nke ga-enyere anyị aka ise ozugbo na ihuenyo dị ka a ga-asị na ọ bụ mbadamba ihe osise.
N'aka nke ọzọ, anyị nwekwara ike iji kọmputa ndị a dị ka a ga-asị na ha bụ mbadamba nkume na e nwere nhọrọ imewe nke dị mfe iji ma ọ bụrụ na anyị nwere ike imetụ ihuenyo aka ozugbo karịa site na iji òké ma ọ bụ ogwe aka. N'ezie, e nwere ọtụtụ ndị na-emepụta ihe, karịsịa ndị na-ese foto, bụ ndị na-ahọrọ iji mbadamba nkume rụọ ọtụtụ ọrụ ha.
Mgbe ị ga-atụle ibuga laptọọpụ
N'ime afọ abụọ gara aga, laptọọpụ na-aghọwanye ọkụ na batrị ha na-adịte aka n'etiti ụgwọ. A nwalere ha ka ha na-emekọrịta ihe. N'ezie, ọ bụrụ na ị na-eme ihe eserese na ụlọ ọrụ ma ọ bụ n'ụlọ ma ọ dịghị mkpa ka ị bugharịa kọmputa gị n'ebe ahụ, ịkwọ ụgbọ mmiri adịghị gị mkpa, mana ị nwere ike iji kọmputa gị gaa ebe a na ebe a. ọ dị mkpa karịsịa ibu na olu.
Dabere n'ụdị eserese ị na-eme, ogo onyonyo nwere ike ịdị gị mkpa karịa ka ọ dị maka onye egwuregwu. IPS ihuenyo kacha mma nke ị nwere ike ịhọrọ, n'agbanyeghị na nke a ga-adaberekwa na mmefu ego gị yana, ọ bụrụ na ịchọrọ imefu ntakịrị ntakịrị, ị nwere ike ịga na LED nwere FullHD.
Anyị egosila gị njirimara ị ga-eburu n'uche mgbe ị na-ahọrọ laptọọpụ gị maka imewe eserese. Anyị egosiwokwa gị ụdị anọ nke anyị na-ahụ kacha amasị gị. Ma ugbu a, ọ bụ naanị gị ka ọ dịịrị ịhọrọ nke ọma ma nweta ihe kacha mma na ya.
Akụkụ ọzọ nke ihuenyo nke ị kwesịrị iburu n'uche mgbe ị na-azụta laptọọpụ maka imewe eserese bụ mmeputakwa agba. Ọtụtụ mgbe, anyị na-enweta nkwupụta sitere n'aka ndị zụtara laptọọpụ na-adịghị mma na agba ndị ha debere maka imepụta ha adịghị ebipụta n'otu ụzọ ahụ na ihuenyo ndị ọzọ ma ọ bụ na ndị na-ebi akwụkwọ, nke bụ nnukwu nsogbu.
Jide n'aka na ị nara laptọọpụ imewe ihe osise site na ndị anyị na-akwado na listi a, nsogbu a ga-ebelata ruo oke. Bụlagodi Anyị na-akwado mgbe niile ka ị were nkeji ole na ole na-edozi ihuenyo ahụ nke ọhụrụ gị na kọmputa iji zere ndị dị otú ahụ nsogbu.
Nlebara anya ndị ọrụ Adobe: Adobe anaghị akwado Chrome OS, nke bụ isi ihe kpatara na ndị na-emepụta ihe anaghị eji Sistemu arụ ọrụ. Windows na Apple Mac OS, n'aka nke ọzọ, na-akwado Adobe, nke pụtara na usoro ndị a na-arụ ọrụ na-ahọrọ na otu n'ime laptọọpụ kachasị mma maka ịmepụta eserese. Ka o sina dị, olileanya adịghị efu na Chrome OS, ebe ị nwere ike iji ihe atụ Pixlr Touch Up (maka foto retouching), Magisto na WeVideo (maka video edezi). Ya mere, ndị ọrụ na-ele obere laptọọpụ Chromebook ndị a agaghị abụ nhọrọ kacha mma maka ndị na-emepụta ihe. Agbanyeghị ụfọdụ forums Ha na-ekwu na ụfọdụ ndị ọrụ ejirila ha mee ihe, mana ihe anyị na-eche bụ ma ọ bara uru ọrụ itinye ya.
Na ndepụta ntụpọ OS Chrome anaghị ejedebe na Adobe, ọ nwekwara obere ohere na draịvụ ike ma e jiri ya tụnyere kọmputa Windows na Mac. Dịka ọmụmaatụ, HP Chromebook 14 nwere 16GB nke nchekwa mpaghara, yana mgbakwunye 15GB nke nchekwa. Google wetara nchekwa igwe ojii efu. Agbanyeghị, ị nwekwara ike ịnweta 100GB nke nchekwa igwe ojii n'efu, ọbụlagodi mgbe afọ abụọ gachara ị kwụrụ ya. N'ụzọ dị iche, Windows Acer Aspire V3 graphic design pc nwere draịvụ ike 500GB, yana mgbakwunye 15GB nke nchekwa OneDrive.
Maka ndị ọrụ oge ụfọdụ na Ndị na-emepụta eserese na-abụghị ndị ọkachamara na Chrome OS Ọ gaghị eme gị nsogbu ma, ọ bụrụ na ị bụ ọkachamara mmebe, a Windows laptọọpụ ma ọ bụ ihe Apple iOS bụ a ga, karịsịa na-atụle eziokwu na ị ga-azọpụta tọn foto na vidiyo na draịvụ ike gị.
Kedu ihe kpatara ịhọrọ laptọọpụ imewe eserese n'elu desktọpụ?
N'ebe a, anyị agwala gị otu esi ahọrọ laptọọpụ maka imewe eserese. Mana tupu ịme mkpebi a, ị ga-ahọrọrịrị n'etiti desktọpụ na laptọọpụ. Nke a bụ ụfọdụ ihe mere ị ga-eji họrọ laptọọpụ:
Ọ bụrụ na ị na-esi ebe a ruo mgbe niile, laptọọpụ bụ ezigbo nhọrọ. Ọbụghị naanị na ị ga-enwe ike iburu ọrụ gị n'agbanyeghị ebe ị na-aga, mana kọmpụta eserese eserese na-akawanye mma na nchekwa ike yana arụmọrụ. Nke a pụtara na ị ga-etinye obere oge na-echegbu onwe gị maka enweghị ọnụ ahịa n'etiti ebe ị na-aga, ma nwee ike iwepụta oge karịa ịrụ ọrụ ahụ n'ezie.
Na-aga Cordless nwere ike ịpụta inwe ohere karịa n'ụlọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị. Ọ bụrụ na ị nwere kọmputa desktọpụ ugbu a, mgbe ahụ ị maralarị na ụlọ elu, nlekota oru, kiiboodu, òké na ihe ndị ọzọ na-abawanye ohere na tebụl gị. Ọ bụrụ na ị na-agbasi mbọ ike na ị ga-achọkwu ohere, mgbe ahụ, laptọọpụ na-enye ụzọ iji rụọ ọrụ imewe eserese na-achọghị ezigbo ala na ụlọ.
Dị ka ihe ngwọta niile na otu, Laptọọpụ dị mma nke ukwuu. Dịka anyị kwuburu, ha nwere ahụigodo, òké, ihe nleba anya na ihe ọ bụla ọzọ n'otu ikpe ị nwere ike iburu. Ihe nlekota laptọọpụ dị ọnụ iji dochie anya, mana ha dịkwa nkọ ma e jiri ya tụnyere nhọrọ desktọpụ. Ụfọdụ laptọọpụ na-enyekwa ọrụ ihuenyo mmetụ aka, na-eme ka ha bụrụ àkwà mmiri dị mma n'etiti mbadamba nkume na kọmputa dị ike karị. Ọ bụrụ na-amasị gị ise ihe atụ ma ọ bụ ka etinyere mbadamba ihe eserese na kọmputa gị, ị nwere ike ịmasị a kọnvatịbụl.
All top graphic design Laptop nwere ihe ha ga-enye nke na-eme ka ha dị iche na desktọpụ na nhọrọ mbadamba, mana ụfọdụ nwere isi ihe siri ike karịa ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ngwọta gị niile n'ime otu nwere ike ịchọ ihuenyo buru ibu karịa ụdị nhọrọ ndị ọzọ.
Enwere kọmpụta eserese eserese dị ọnụ ala?
Ee, enwere laptọọpụ maka imewe eserese dị ka nke ị nwere dị n'elu ahịrị ndị a mana nke bụ eziokwu bụ na ị ga-enwerịrị nkwenye maka mbelata ahụ n'ọnụ ahịa ịzụrụ.
Ị ga-eburu n'uche na na laptọọpụ iji chepụta, ihe kachasị mkpa bụ ihuenyo, RAM, processor na eserese.
Ọ bụrụ na anyị ga-azụta laptọọpụ dị ọnụ ala karịa, anyị ka nwere ike ịkụ nzọ na ikike dị ala, na-atụkwasị obi iji draịvụ ike mpụga ma emechaa. Nke ahụ bụ, n'etiti laptọọpụ nwere 512GB nke SSD na 256GB, n'ezie anyị nwere ike ịzụta nke abụọ ma ọ bụrụ na ọ dị ọnụ ala karịa ebe ọ bụrụ na enwere ntakịrị ihe dị iche na ọnụahịa, ọ gaghị akwụ ụgwọ. Dịka ọmụmaatụ, n'ihe banyere Apple anyị na-ekwu maka ihe karịrị € 200 dị iche n'etiti ikike kachasị na nke kacha nta.
Ngwa ndị ị nwere ike iji na kọmpụta ndị a maka imewe
Mgbe a bịara na mmemme maka edezi onyonyoNgwa mbụ pụtara na mkparịta ụka bụ Photoshop. Nke mere na na Spen anyị ewepụtala ngwaa iji rụtụ aka na ndezi onyonyo: Chopear. Amụma Adobe na-enye anyị ohere iji ụdị ngwa ọrụ dị iche iche mee ụdị mmegharị ahụ niile, gụnyere usoro iheomume nke anyị nwere ike iji mepụta onyonyo na-akpali akpali.
Ma ọ bụghị. Dị ka ọ na-ewute ụfọdụ ndị ọrụ, dị ka ndị na-agbachitere ngwanrọ efu, Photoshop enweghi onye ozo. Ọ bụghị naanị ihe anyị nwere ike iji ya mee, mana iji ya na-enwekwa nghọta karịa ngwa ndị ọzọ nke nwere ike ịchọ ịgbaso n'ụra ya ga-adị.
Photoshop ga-enye anyị ohere ịme ndezi ndị bụ isi, dị ka ịgbakwunye ihe nzacha, ihe oyiyi ịkpụ, ịgbakwunye ederede ma ọ bụ gbanwee nha na usoro ha, yana ndị ọzọ dị elu, dị ka ndị ga-enyere anyị aka ihichapụ onye na-akpọghị ya na ọnọdụ ahụ, blur, clone ... Ihe niile ị nwere ike iche n'echiche ị nwere ike ime na Photoshop, na ụzọ ime ya ga-adịtụ mfe.
InDesign bụ ngwa nke anyị ndị rụworo ọrụ na ndị nbipute ma ọ bụ azụmaahịa metụtara ya ga-aghọta nke ọma nke ebumnuche ya. Ọ na-eje ozi na nhazi, nke kọwara ngwa ngwa na nke na-adịghị mma pụtara na anyị nwere ike iji InDesign chịkọta ederede na akụkụ.
Ya bụ na-ekwu: dị nnọọ ka Okwu bụ tumadi emebere maka ederede edezi, InDesign nwere ngwá ọrụ na-enye anyị ohere ide, ma ndị ọzọ nke anyị nwere ike ibugharị ederede na akụkụ ọzọ nke dabara anyị mma, oyiyi, ndịna-emeputa ... N'ụzọ bụ isi ya. bụ ngwa eji ahazi ederede na / ma ọ bụ onyonyo nke a ga-emecha bipụta maka akwụkwọ ma ọ bụ katalọgụ ọ bụla.
Onye ihe ngosi
Onye na-ese foto bụ a editọ eserese eserese. Eserese ndị a bụ ihe dị iche iche nwere akụrụngwa mgbakọ na mwepụ ma ọ bụ njiri mara dịka ọnọdụ ha, ọdịdị ma ọ bụ agba ha siri dị.
Anyị ga-eme nke a n'ihe ha na-akpọ "ogbako nka" ma ọ bụ "tebụl ọrụ", ọ na-agụnyekwa ngwaọrụ ndị ga-enyere anyị aka ịkwaga na dezie ihe iji nweta eserese anyị na-achọ.
AutoCAD bụ ngwa imewe kọmpụta maka onyonyo 2D ma ọ bụ ihe ngosi 3D. A na-eji arụ ọrụ dịka mepụta atụmatụ nhazi ụlọ.
N'ezie, blueprints bụ kpọmkwem ihe kpatara AutoCAD. Naanị ihe bụ na, n'ime afọ ndị gafeworonụ, a na-agbakwụnyekwu ọrụ na atụmatụ nwere ike igosi nkọwa ziri ezi na ihe oyiyi doro anya.
Ntụgharị asụsụ ozugbo nke "ụlọ ọkụ" ga-abụ ihe dịka "ọnụ ụlọ ọkụ." Ma ọ bụ nke ahụ, dịka Photoshop na-enyere anyị aka dezie, Lightroom Ọ ga-enyere anyị aka ịchekwa ihe oyiyi ma nwee ike ịhụ ha na ngwa ngwa na n'usoro.
Yabụ, n'ụzọ bụ isi, Lightroom bụ ọba akwụkwọ foto nke Adobe na-enye anyị, nke ga-enyekwara anyị ohere ịmegharị ụfọdụ mana ọ bụ isi.
After Effects bụ ngwa dị ka ụlọ ọrụ anyị nwere ike mepụta ma ọ bụ tinye ihe mejupụtara, yana ịme eserese ọkachamara nke nwere ike ịbụ na mmegharị ma ọ bụ mmetụta ndị ọzọ pụrụ iche.
Otu n'ime ike nke After Effects bụ na ọ gụnyere ọtụtụ plugins ndị ọzọ na-enyere aka mee ka ibu ọrụ dị mfe. Mana, na nkenke, anyị na-eche ngwanrọ ihu nke anyị nwere ike iji mepụta mmetụta metụtara mmegharị ahụ.
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Ịba uru » Laptọọpụ maka eserese eserese
6 kwuru na "Laptop for graphic design"
Ọktoba 2017-06 na elekere 06:9 nke ụtụtụ
Na-akpali nnọọ mmasị, n'ezie. Agbaghara m nkọwa ụfọdụ gbasara okpomoku na mkpọtụ nke fan. M na-achọ ijide EMVY mana ha gwara m na ọ gbazere okpokoro okpomọkụ na onye fan ahụ na-ata ahụhụ.
Maka m ọ bụ akụkụ dị mkpa. M ga-ahọrọ maka 15 ″ Acer V Nitro
Ọktoba 2017-06 na elekere 06:5 nke abalị
Ana m enyocha ihe laptọọpụ m na-esote ga-abụ.
Site na nyocha mbụ, laptọọpụ Acer Aspire V3-575G (Core i7 6500U / 2,5 ghz / merie 10 mbipụta ụlọ 64 bits / 16 GB RAM / 1TB HDD / GF 940 MB ka ahọpụtara ma nke a bụ nsogbu 1366 × 768 nke ihuenyo. )
Dị ka m na-etinye n'ihu nsogbu bụ ihuenyo mkpebi, Achọrọ m ka m nwee ike ibunye onye ahịa na laptọọpụ m ma m bu n'obi na-arụ ọrụ na kọmputa desktọọpụ na laptọọpụ dị ka a ga-asị na ọ bụ CPU. Mgbe mirroring na laptọọpụ na ihuenyo na a ibu nke, ya mkpebi bụ nnọọ ala. Enyerela m kọmpụta laptop nke ụdị a maka ihe dịka € 1150 (VAT gụnyere)
M ga-eji ya maka ihe nlegharị anya n'ibu 3D (ọrụ siri ike) yana ihe nrụpụta na nhazi na eserese eserese.
Kedu ihe ị kwadoro m?
Daalụ Maturin maka ịza ajụjụ. N'agbanyeghị na m kwesịrị itinye ya, onye ofufe bụ ihe m tụlere. Banyere ihe ị na-ekwu banyere HP Envy, ọ bụ eziokwu na okpomọkụ nwere ike ibili mana ọ nwere ngwọta. Ịga na Catalyst Control Center na ịgbanwe nhọrọ PowerPlay iji bulie ndụ batrị. N'amaghị kpọmkwem ihe kpatara ya, na nhọrọ a, ọ na-ebelata okpomọkụ nke processor na kaadị eserese na-eme ka ọ ghara ibelata ọrụ ọma nke Envy. Mgbe nke a gasịrị, ị nwere ike ịdaba nke ọma 15 Celsius nke ọma.
Ọktoba 2017-06 na elekere 07:11 nke ụtụtụ
Ndewo, Pablo. M ga-akwado gị ka ị lelee Acer Aspire nke m jikọtara na ntụnyere ahụ. Echere m na ọ bụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma n'ihi na ọ bụrụ na ọ bụ ngwá ọrụ ị ga-eji kwa ụbọchị maka ịmepụta eserese ma ọ bụ ihe ngosi 3D n'ọnọdụ gị, euro ole na ole ọzọ na ụdị Aspire a ga-asụgharị na mkpebi dị elu. Nke ị na-ekwu nwere 1366 × 768 ebe nke m na-ejikọta bụ 1920 x 1080 n'ezie na-efu ihe dịka 200-300 euro karịa nke ị kwuru. Otú ọ dị, na ndị anyị na-arụ ọrụ na laptọọpụ dị ka ngwá ọrụ bụ isi, ọ dịghị ewute ịhapụ m ego karịa na ngwa ndị na-eme naanị ihe efu, ọ bụ ezie na nke a bụrịrị echiche nkeonwe 🙂
Ọktoba 2017-06 na elekere 21:4 nke ụtụtụ
Ndewo, Ezi akụkọ daalụ maka ozi ahụ. Laptọọpụ ochie m enweghị olileanya na achọrọ m ịzụrụ nke ọzọ. Azụtara m nnukwu mbadamba ihe osise XP-PENArtist 24 Pro. Ana m achọ ihe na-aza m nke ọma mgbe m na-arụ ọrụ na Photoshop, onye na-ese ihe, inDesign, nke nwere ọtụtụ ọkwa na faịlụ buru ibu, ihe (ọ bụ ezie na ọ kapịrị ọnụ) maka ntinye vidiyo ... nke na-adịghị arọ ma ọ bụ karịa ma ọ bụ obere ọnụ ala.
Ọktoba 2017-06 na elekere 11:4 nke ụtụtụ
Ndewo, ezigbo mgbede, a na m achọkwa kọmpụta desktọpụ ma ọ bụ laptọọpụ maka nwa nwa m na-amụ ụdị ejiji, nke ị na-akwado, ọ ga-amasị m ka ọ bụrụ Samsung.